उच्च रक्तचापको जोखिममा को ? जान्नैपर्ने १० कुरा - Internet Khabar
Home News उच्च रक्तचापको जोखिममा को ? जान्नैपर्ने १० कुरा
उच्च रक्तचापको जोखिममा को ? जान्नैपर्ने १० कुरा
कुनै समयमा आक्कलझुक्कल देखिने ब्लडप्रेसर (उच्च रक्तचाप)को समस्या अहिले धेरैको साझा भएको छ । २० देखि ३० बर्षका जवानमा पनि यो समस्याको लागि नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । ब्लडप्रेसरका कारण मध्ये करिब २ देखि ३ प्रतिशतको मात्रै कारण प्रष्ट देखिएको छ । बाँकी ९७ प्रतिशतको कारण पत्ता लागेको छैन ।
ब्लडप्रेसर सुन्दा सामान्य लागेपनि यसले गर्ने भयानक असरहरुबारे मानिसहरुमा पर्याप्त जानकारी नभएकोले होला, खासै महत्व दिएको पाइदैन। जसले ब्लडप्रेसरले गर्ने दुर्घटना प्रत्यक्ष देखेका हुन्छन्, भोगेका हुन्छन् । उनीहरुले मात्रै ब्लडप्रेसर यस्तो रहेछ भनेर आत्मसात गरेका हुन्छन्। ब्लडप्रेसर सम्बन्धि प्रशस्त भ्रम छन् । यसको औषधी खायो भने यस्तो हुन्छ रे, जिन्दगीभरि खानुपर्छ रे, साइड इफेक्ट गर्छ रे भन्ने धेरै किसिमका भनाइहरु सुनिन्छन्, तर औषधी नखाई सधैं हाइ ब्लडप्रेसर लिएर हिंड्दा के के खतरा हुन्छ भन्ने कसैले विचार गरेको देखिंदैन।
परिवारमा उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, पक्षाघात, मिर्गौला फेल, दृष्टिघात आदि भएका
१) रक्तचाप नियन्त्रण नभएको मानिसले रक्सी सेवन गरेमा मष्तिस्कघात हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
२) मधुमेह भएका मानिसमा उच्च रक्तचाप भएमा मुटु र मिर्गौला रोग चाँडो देखिन्छ ।
३) उच्च रक्तचाप देखिने बित्तिकै औषधि सुरु गर्नु हुँदैन । तर असर देखिएमा डाक्टरको सल्लाहअनुसार औषधि सुरु गर्नुपर्छ ।
४) औषधि आफूखुसी छाड्नु हुँदैन । बीचमै छाड्दा मष्तिस्कघात र हृदयघात हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
५) मुटुरोग विशेषज्ञको सल्लाह बिना औषधि सेवन गर्नुहुँदैन ।
६) जीवनशैली परिवर्तन पछि रक्तचाप नियन्त्रणमा आएमा विशेषज्ञको निगरानीमा औषधि बन्द गर्न सकिन्छ ।
७) उच्च रक्तचाप भएका महिलाले परिवार नियोजनको अस्थायी साधनमा हर्मोनल विधिको विकल्प खोज्नु पर्छ।
८) गर्भवति महिलालाई उच्च रक्तचाप देखिएमा विशेषज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ ।
९) २० वर्षभन्दा कम उमेरमा देखिने उच्च रक्तचापलाई सेकेन्ड्री हाइपरटेन्सन भनिन्छ । यसमा उच्च रक्तचाप हुने कारण खोजेर उपचार गरिन्छ ।
१०) पोटासियम बढी भएको खानेकुराले रक्तचाप घटाउछ । सुन्तला, कागती, मौसम, केरा र ताजा फलपूmलमा पनि पोटासियम बढी पाइन्छ ।
Previous articleतामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउनुका १० फाइदा
Next articleमीठो निद्राका लागि उपनाउनुहोस् यी उपयोगी टिप्स